एचआइभीले सिद्धिएको जिन्दगी अब कसले फिर्ता दिन्छ ? काठमाण्डौंको घर, परिवार सबै गुम्यो (भिडियो सहित) - Tufan Media News
एचआइभीले सिद्धिएको जिन्दगी अब कसले फिर्ता दिन्छ ? काठमाण्डौंको घर, परिवार सबै गुम्यो (भिडियो सहित)
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार १०:२७ 279 पटक हेरिएको
४१ बर्षका सुमन कार्की अहिले एचआइभी विरुद्धको एआरभी औषधी सेवन गरीरहेका छन् । उनी विगत १७ बर्षदेखि एचआइभी संक्रमित छन् । लागु औषध दुव्र्यसनमा फसेपछि सुमन एचआइभी संक्रमित मात्रै भएन, घर परिवार, आफ्ना आफन्त सबै गुमाए । उनको परिवार काठमाण्डौंमै बस्थ्यो । उनी काठमाण्डौंमै हुर्किए । यतै पढे ।
स्नातकसम्मको पढाई सकेका सुमन अर्काको देखासिखी र अव्यवस्थित परिवारकै कारण लागु औषघ दुव्र्यसनमा फँसेको बताउछन् । तर उनिसँग केही छैन । काठमाण्डौंको सातदोबाटोको घर उनले लागु औषधमै उडाए । ‘अहिले म सँग केही छैन’ उनले भने, ‘अब म सँग भनेको त्यही एचआइभी छ ।’ आफुसँगको एचआईभीलाई अब अनुभवको रुपमा काम गर्ने उनको योजना छन् ।
उनि अब सबै संक्रमितको क्षेत्रमा काम गर्न चाहान्छन् । अहिले पनि धेरै संक्रमितले अकालमा ज्यान गुमाउन परेको उनले सुनाए ।
एचाईभी संक्रमितलाई परिवारका सदस्यसँगै समाजले समेत अहिले स्वीकार्ने अवस्था नहरेको भन्दै उनले यसलाई सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘परिवारका सदस्यकै कारण धेरै युवाहरु लागु औषधको दलदलमा फसेका छन् ।’ उनले भने, ‘मेरो पनि त्यस्तै अवस्था हो ।’
आमा—बुबाको माया पाउन नसकेका सुमन लागु औषध र त्यसको नसमा झुम्न थाले । त्यसैका कारण उनि एचआईभी संक्रमित पनि भए । संक्रमित भएपछि उनले सबै गुमाए । उनको श्रीमतीसँगको सम्बन्धन पनि टुट्यो । अब भने उनले एचआईभी संक्रमितलाई नै आफन्त सम्झन थालेका छन् ।
डेंगुको उपचारमा मेवाको पातको
पाइल्स भएर हैरान हुनुहुन्छ